मिर्गौला रोगी भन्छन्– ‘यसै मर्ने त होला !’- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक २७, २०७४ दीपक परियार, बिना थापा
लेखनाथ (कास्की) — देशलाई चुनाव लागेको छ । पोखरा लेखनाथको भण्डारढिकमा चिया पसल थापेका निलबहादुर थापाको मनमा भने कुनै हर्ष छैन । पृथ्वी राजमार्गको कोत्रे–पोखरा खण्डमा पार्टीका झण्डा फहराउँदै आहोरदोहोर गरेका गाडी हेर्ने ध्याउन्नमा उनी छैनन् । बरु ‘फेल’ भएका दुवै मिर्गौलाको उपचार खर्च कसरी जुटाउने भन्ने तर्कनाहरुले उनको मनमा ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् ।
स्याङ्जा हरिनास गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास भएपनि उनी आदर्शचोकमा बस्न थालेको २ वर्ष भयो । गाउँको पाखो बारी । केही हल खेत । बिना पेन्सनका बुबाआमा । घरको माइलो छोरो उनी १० वर्षअघि साउदी अरब हान्निए । साउदीमा २ वर्ष बसेर दुबई गए । त्यहाँको क्याटरिङ कम्पनीमा काम गर्दागर्दै ०६८ मा उनको दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोड्यो । एक महिना डायलसिस गरेर कम्पनीले उनलाई घर पठाइदियो । ३० वर्षको उमेरमै मृगौला बिग्रिएपछि उनले घरपरिवार सम्झे । श्रीमती र २ छोरीको भविष्य सम्झिए । मन त्यसै विरक्तियो ।
उनी नेपाल फर्किए । मनमा शान्ति थिएन । तैपनि रोगै पो छैन कि भनेर फेरि जँचाए । चिकित्सकले छिट्टै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने सल्लाह दिए । त्यतिबेला डायलसिस नि:शुल्क भइसकेको थिएन । विदेशमा अलिअलि कमाएको पैसा डायलसिस र अरु औषधीमुलोमै सकियो । पैसा सकिएपछि अलिअलि ऋणसापट गरे । आफन्तकोमा धाए । केही उपायँ लागिहाल्छ कि भनेर सकेको कोशिष गरे । केहीसीप नलागेपछि तत्कालीन किचनास गाविस कार्यालयबाट ‘कागज’ बनाए र सहयोग उठाउन हिँडे । गाउँ वरिपरिकाले पनि केही सहयोग त गरे । तर त्यसले पनि मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने खर्चको जोहो भएन । उठेको सहयोग डायलसिसमै सकियो ।
२ वर्षअघि साढुदाईले आदर्शचोकमा चियापसल खोल्न सहयोग गरे । श्रीमती अनीतासँग उनी चियापसल चलाएर बसे । पोहोरदेखि सरकारले डायलसिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण नि:शुल्क बनायो । अहिले उनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा नियमित डायलसिस गर्छन् । मृगौला प्रत्यारोपण नि:शुल्क भएपनि डाक्टरले अरु खर्च ५–७ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ भनेका छन् । महिनामा ४ पटक रगत हाल्नुपर्छ । दिनदिनै औषधी खानुपर्छ ।
चियापसलको आम्दानी उनकै उपचारमा सकिएको छ । ‘२/४ कप चिया बेचेर के नै हुन्छ र !,’ उनी भन्छन्, ‘वरिपरिका पसलेले मेरो अवस्था देखेर माया गरेकाले अलिअलि बिक्री हुन्छ ।’ उनकी १४ वर्षकी छोरी स्याङ्जाकै घरमा बसेर १० कक्षामा पढ्दैछिन् । ११ वर्षीया कान्छी छोरी मामाघरमा बसेर ६ कक्षामा पढ्छिन् । उनका जेठो दाइ पोखरामा ट्रयाक्टर चलाउँछन् । कान्छो भाइ गाउँमै बेरोजगार छन् ।
उनले डायलसिस गर्दै बसेको ७ वर्ष भइसक्यो । डाक्टरले उनलाई जतिसक्दो छिटो मिर्गौला फेर्न भनिरहन्छन् । मिर्गौला फेर्न चाहिने ७ लाख रुपैयाँ जुटाउने उपाय उनीसँग छैन । ‘कति मिर्गौलारोगी अस्पतालको छतबाट हामफालेर मरे भनेको सुन्छु,’ निराश हुँदै उनले भने, ‘आफैंलाई अप्ठयारो भएर बस्नुभन्दा मर्नु ठिक भनेर त होला ।’ यसरी कहिलेसम्म चल्छ भन्ने उनले ठम्याउन सकेका छैनन् । उनी भन्छन्, 'गाउँको जग्गा बिक्दैन । न ठाउँमा आफ्नो मान्छे छन् । न कसैले सहयोग उठाउने अभियान चलाइदिएका छन् । बाँकी जीवन मैले के गरी कटाउने ?'
‘यसै मर्ने त होला,’ छेउमा उभिएकी श्रीमतीलाई पुलुक्क हेर्दै उनले भने, ‘मर्नु बाहेक के विकल्प छ र ।’
उनलाई जसको सरकार आएपनि सबै प्रकारको स्वास्थ्योपचार नि:शुल्क भए जनताले राहत पाउँछन् जस्तो लाग्छ । भन्छन्, ‘धनीलाई नभएपनि गरिबको उपचार नि:शुल्क गर्दिए लाउँलाउँ खाउँखाउँ उमेरका छोराछोरीको बिचल्ली हुने थिएन । सहयोगी हातले जनता बैंकमा रहेको मेरो खाता नम्बर ०८६११००४७२६२४०१ मा रकम जम्मा गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि !'
प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ १६:५६
स्वास्थ्यमा काम गर्न यूएनएफसीसीसी र डब्लूएचओवीच सम्झौता
कार्तिक २७, २०७४ अब्दुल्लाह मियाँ
बोन (जर्मनी) — जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानसम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले सहकार्य गर्ने भएका छन् ।
यहाँ जारी यूएनएफसीसीसीको २३ औं सम्मेलन (कोप २३) मा जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको तापक्रम वृद्धिका कारण सिर्जित मानवीय स्वास्थ्यमा काम गर्न दुई निकायले आइतबार सम्झौता गरेका हुन् । बढ्दो तापक्रमका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा स्वास्थ्यसम्वन्धि महामारी फैलिंदा विकासोन्मुख मुलुककका लाखौं मानिस चपेटामा पर्ने गरेका छन् ।
स्वास्थ्यसम्वन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्राविधिक र पूर्वाधारको तयारीका लागि तत्पर हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । विशेषत: मानवीय स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखेर नया कार्यक्रमहरु तयार गरिनेछ, सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपाललगायत अति कम विकसित मुलुकहरुमा पनि बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाली क्षेत्रमा नयाँ किसिमका रोगको प्रकोप बढेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य पनि महत्वपूर्ण खम्बा भएको स्मरण गर्दै यूएनएफसीसीसी र डब्लूएचओका विशेषज्ञहरुले समस्या झेलिरहेका मुलुकहरुमा आवश्यक सहयोग आदानप्रदान गर्न तत्कालै लागि पर्ने बाचा गरेका छन् । यसअघिका सम्मेलनमा स्वास्थ्यसम्वन्धी समस्या पहिचान भए पनि तीनलाई लक्षित कार्यक्रम तय हुन सकेको थिएन । सम्झौतापछि जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि राष्टसंघीय महासन्धिकी कार्यकारी सचिव प्याट्रिसिया इस्पिनोसाले स्वस्थ विश्व र स्वस्थ नागरिकको भविष्यको परिकल्पनालाई यो कार्यक्रमले सार्थकता दिने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
धेरै मानिसहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित वातवारणीय र वायु प्रदूषणका साथै स्वच्छ खानेपानीको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, उनले भनेकी छन्, 'खाद्य समस्या र स्वच्छ पिउने पानीको उपलव्धता अहिलेको आवश्यकता हो ।' उनलका अनुसार सन् २०३० देखि सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनजन्य समस्या कारण प्रतिवर्ष करिब दुई लाख ५० हजार मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने अनुमान गरिएको छ ।
दुई पक्षीय सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यासंग जुध्न क्षमता अभिवृद्धिका साथै स्वास्थ्यजन्य जोखिम न्युनीकरणमा अघि बढ्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि राष्ट्रियस्तरमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेसमेत उल्लेख छ । यस्तै, यूएनएफसीसीसी र डब्लूएचओबीच साना टापु मुलुकले झेलिरहेका स्वास्थ्यसम्वन्धी समस्या समाधानमा पनि काम गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।